निर्वाचनमा मतदाता को भूमिका | Hamro Patro
निर्वाचनमा मतदाता को भूमिका
Suyog Dhakal - Nov 26 2017
स्मरण रहोस् स्थानीय चुनाव र यस चुनावमा व्यालेट पेपर अर्थात मतपत्र र मत हाल्ने तरिका पनि केही फरक हुन्छ । मतदान केन्द्रमा जाँदा आफ्नो पहिचान खुल्ने कुराहरु जस्तै नागरीक्ता या चालक अनुमती पत्र या स्कूलकलेजका परिचयपत्र भए पनि लिएर जाने ।
निर्वाचनमा मत दिन अनि आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवार चयन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ?
तपाईको भूमिका र तपाईको मतको भूमिका भविष्यमा धेरै महत्वपूर्ण साबित हुनेवाला छ ।
निर्वाचनमा हामी सम्पूर्ण मतदाताहरु को भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ त ?
सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवारहरु का बारेमा राम्रो अध्ययन अनि जानकारी हासिल गरेको हुनपर्दछ । मतदान कै दिन मात्र निधो गरेर मत खसाउने भन्दा पनि कसलाई मत दिने अनि किन दिने भन्ने बारे तयारी जरुरी छ । अर्को हिसाबले कसलाई मत नदिने अनि किन नदिने भन्ने कुरा पनि बिष्लेषण जरुरी छ । नातागोता या अन्य समबन्धका आधारमा हो या बास्तवमै आफ्ना प्रतिनीधी हुन लायक भएर मत दिन आँटेको भन्ने बिषय केलाउन जरुरी छ ।
हाम्रो फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्र अनि नामावलीमा आफ्नो नाम कहाँ छ ? कुन मतदान केन्द्रमा छ ? मतदान केन्द्र कहाँ छ आदि जस्ता कुराहरु पहिले नै जानकारी दिन जरुरी छ ।
त्यपछि समयमै मतदान केन्द्रमा पुगेर शान्तिपूर्वक मतदाता लाईन मा बस्ने अनि पालो पर्खेर मतदान गर्ने पनि हाम्रो भूमिका हो । स्मरण रहोस् अशक्त र बृद्धबृद्धाहरु लाई भने प्रार्थमिक्ता दिइन जरुरी छ, यो त हामीले सधै गरिआएका नै छौं ।
मत हाल्दा चाँही राम्ररी बुझेर अनि छाप नबिग्रिने गरि मत हाल्न जरुरी छ । स्मरण रहोस् स्थानीय चुनाव र यस चुनावमा व्यालेट पेपर अर्थात मतपत्र र मत हाल्ने तरिका पनि केही फरक हुन्छ ।
लाईनमा बसेका मतदातालाई आफ्नो गोप्य मतदानका बारेमा यसलाई हाल्ने या नहाल्ने भन्ने बिषयमा नभन्ने, या होहल्ला नगर्ने पनि हाम्रो प्रमुख दायित्व हो है ।मतदान केन्द्रमा जाँदा आफ्नो पहिचान खुल्ने कुराहरु जस्तै नागरीक्ता या चालक अनुमती पत्र या स्कूलकलेजका परिचयपत्र भए पनि लिएर जाने ।
मताधिकारका बारेमा या मत हाल्ने तवरका बारेमा आफूलाई जानकारी भएका कुराहरु अन्य मतदाता लाई पनि भन्ने । गाँउघरमा मतदान गर्न जान सबैलाई सुचना दिने र प्रोत्साहन गर्ने ।
मतदान केन्द्मा खटिएका सुरक्षाकर्मी या कर्मचारीलाई केही सहयोग परेमा सहयोग गरिदिने ।
मतदान केन्द्रमा मतदानलाई प्रतिकुल असर गर्ने कुराहरु या घटनाक्रममा नलाग्ने । र मुख्य भूमिका चाँही निर्वाचन आचार संहितामा कुनै उल्लंघन भएको पाएमा मतदान अधिकृत या सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराउने ।
स्मरण गरौं यस मतदानमा निर्भिक भएर मतदान गर्न पाउनु सम्पूर्ण नेपाली मतदाताको अधिकार हो ।